लौ, गृहमन्त्री ज्यूलाई पनि कुरीकुरी! प्रेस संयोजक विवादको भित्री कुरा यस्तो रहेछ – Media Kurakani
लौ, गृहमन्त्री ज्यूलाई पनि कुरीकुरी! प्रेस संयोजक विवादको भित्री कुरा यस्तो रहेछ
May 31st, 2015 Rabi Raj Baral Feature Stories
कुरो ठूलो होइन तै पनि कुरामा कुरा चलेपछि चुप लागेर बस्न सकिएन।
केही दिनअघि एउटा ब्लगमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई कुरीकुरी गरेको आज गृहमन्त्रीलाई कुरीकुरी भन्नुपर्ने भयो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कसैलाई पनि प्रेस संयोजक वा सल्लाहकार वा सहयोगीको रुपमा नियुक्त गरेका छैनन् रे। उनको निजी सचिवालयले जेठ १६ गते जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्नुस् (माथि)।
गृहमन्त्रीका निजी सचिव गणेश बहादुर अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा मुख्य तीन कुरा छन्। पहिलो, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा पत्रपत्रिका लगायत संचार माध्यममा केही व्यक्तिहरुले म गृहमन्त्रीको प्रेस संयोजक/सल्लाहकार/सहयोगी हुँ भन्ने गरेका छन्। दोश्रो, गृहमन्त्रीले कसैलाई पनि प्रेस संयोजक/सल्लाहकार वा सहयोगीको रुपमा नियुक्त गरेका छैनन्। तेश्रो, ‘अनाधिकृत व्यक्तिहरुका विचारलाई आधिकारिकता नदिन र भ्रममा नपर्न’ उनले आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर विभिन्न मिडियाले पनि यसबारे समाचार लेखेका छन्। कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट केही उदाहरण हुन्।
कान्तिपुर भन्छ– विज्ञप्ति कसप्रति लक्षित गरिएको हो? खुलाइएको छैन।
नागरिक भन्छ– गृह मन्त्रीका तर्फबाट उनका नीजि सचिवले निकालेको विज्ञप्ति कसप्रति लक्षित गरिएको हो? त्यो खुलाएका छैनन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट भन्छ- गृहमन्त्रीका निजी सचिवले निकालेको विज्ञप्तीमा व्यक्तिको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन।
उसोभए विज्ञप्तिमा भनिएका ‘अनाधिकृत व्यक्तिहरु’ को हुन् त? विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा गृहमन्त्रीको प्रेस संयोजक/सल्लाहकार/सहयोगी हुँ भन्ने एकजनामात्र नभएर एकभन्दा बढि व्यक्ति छन् भन्ने बुझिन्छ।
धेरै पत्रकारलाई थाहा छ- गृहमन्त्रीको प्रेस संयोजकको रुपमा विश्वमणि सुवेदीले काम गरेका थिए। उनी प्रेस चौतारी नेपालका कोषाध्यक्ष पनि हुन्।
गृहमन्त्री चीन जाँदाको एउटा समाचारमा उनलाई प्रेस संयोजकका रुपमा ‘कोट’ गरिएको छ। अनलाइनखबरको एउटा समाचारमा गृहमन्त्रीको ‘स्वकीय सचिवालयको तर्फबाट प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले विज्ञप्ति जारी’ गरेको लेखिएको छ। भूकम्पपछि अनलाइनखबरमै छापिएको अर्को समाचारमा पनि सुवेदीलाई नै कोट गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन, भूकम्पपछि सुवेदीले अनलाइनखबरमा एउटा लेख लेखेका छन्, जसको अन्तिममा उनको परिचयमा पनि ‘पत्रकार सुवेदी गृहमन्त्री गौतमका प्रेस संयोजक हुन्’ लेखिएको छ।
के यी समाचार तथा लेख गलत हन् त? पक्कै होइनन् होला। कि अनलाइनका पत्रकार/सम्पादकले हचुवामा कोट तथा परिचय हाल्दिन्छन् भनेर बुझ्नुपर्‍यो।
विश्वमणि सुवेदीले समेत ‘विज्ञप्तीले कसलाई लक्षित गरेको भन्ने आफूले नबुझेको’ बताएपछि झन् अचम्म भएन त?
‘म गृहमन्त्रीको नियुक्तिवाला प्रेस संयोजक पनि होइन। मैले व्यक्तिगत हिसावमा सहयोगमात्रै गरिरहेको छु’, अन्नपूर्णसँग उनले भनेका छन्। नागरिकसँग पनि उनले आफूले सरकारी नियुक्ति नलिएको प्रस्ट पारेका छन्।
समाचारमा उनैलाई गृह मन्त्रीका प्रेस संयोजक भन्ने, लेखमा उनको परिचयमा पनि प्रेस संयोजक भन्ने, गृहमन्त्रीको सचिवालय नियुक्ति नै गरेको छैन भन्ने अनि सुवेदी सरकारी नियुक्ति लिएको छैन भन्ने। अचम्मको घनचक्कर भएन त?
भएको यसो रहेछ
खास भएको के हो त? गृहमन्त्री वामदेव गौतम र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालबीच चर्काचर्की परेछ।
विषय थियो- विश्वमणिले लेखेको एउटा लेख। लेखमा उनले गृहमन्त्री वामदेव गौतमले किन काम गर्न सकेनन् भनेर वर्णन गरेका थिए। गौतमले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्नुका पछाडि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै अर्को तप्काको हात रहेको सुवेदीले उल्लेख गरेका थिए।
मिनेन्द्र रिजालको नामै किटेर उनले लेखेका छन्-
बामदेवले सुरुमै तत्कालित राहतस्वरुपको रकम घोषणा गर्न चाहनुभएको थियो, अर्थका कारण सम्भव भएन। चीनका हेलिकोप्टरका कुरा आए। वामदेवलाई झोसिएको छ। चिनियाँ हेलिकोप्टरलाई ल्याण्ड गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा उठाइँदा मात्रै पनि मीनेन्द्र रिजालहरुले बैठकबाटै कसलाई एसएमएस गरेका थिए? खेलोमेलो अन्त चल्ने, बद्नामी वामदेवले बोक्नुपर्ने?
काठमाण्डु टुडे डट कममा प्रकाशित यो लेखको शीर्षक छ- क्याबिनेटबाटै ‘विदेशी प्रभु’लाई गोप्य म्यासेज पठाउने मीनेन्द्र, गाली खाने बामदेव?
यो लेख प्रकाशित भएपछि गृहमन्त्री गौतम र सञ्चारमन्त्री रिजालबीच चर्काचर्की नै परेछ। मिनेन्द्रले वामदेवलाई थर्काएछन्- क्याबिनेटमा भएका कुरामा प्रचारबाजी गर्ने?
उनीहरुबीचको चर्काचर्कीको कारक बन्यो विश्वमणिको लेख। गृहमन्त्रीका लागि विश्वमणि निल्नु न ओकल्नु बने। लेख उनकै नाममा छापिएको छ। परिचयमा गृहमन्त्रीका प्रेस सहयोगी लेखिएको छ। कसरी गर्ने सेफ ल्यान्डिङ?
उपाय निस्क्यो- लेख डिलिट गर्न लगाउने। तर लेख छापेको अनलाइन डिलिट गर्न किन मान्थ्यो? फेरि अर्को प्रस्ताव गयो- कम्तीमा परिचय हटाइदिने। यसमा चाहिँ उक्त अनलाइन सहमत भएछ। त्यसपछि विश्वमणिको परिचय हटाइयो। साइटमा रहेको लेखमा लेखकको परिचय हटाइए पनि वेबक्यासमा भने त्यो सुरक्षित छ।
लेख जेठ १४ गते छापिएको थियो भने गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट विज्ञप्ति त्यसको दुई दिनपछि अर्थात जेठ १६ गते। भएन त अचम्म?
जब सुवेदीको परिचय हट्यो, त्यसपछि गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्यो- गृहमन्त्रीका कोही प्रेस संयोजक/सल्लाकार तथा सहयोगी छैनन्। भएन त मन्त्री मन्त्रीबीचको झगडाको सेफ ल्यान्डिङ?
मैले सुरुमै भनिसकेको छु- कुरो ठूलो होइन तै पनि कुरामा कुरा चलेपछि चुप लागेर बस्न सकिएन।
नखुलेको कुराचाहिँ सरकारी नियुक्ति बिना स्वयंसेवा गरिरहेका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई किन बलिको बाख्रो बनायो गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयले? मात्र गौतम-उनको लेखले गौतम र रिजालबीच निम्त्याएको द्वन्द्वको सेफ ल्यान्डिङका लागि?
Tags Bamdev Gautam Bishow Mani Subedi Home Ministry
नयाँ पत्रिकामा ‘मिस्टर सोलमारी’ को कथा »
« पत्रकारिताः पैसा, प्रश्न र पीडा